Wararka Maanta: Talaado, Oct 2 , 2012-Hay'adda MSF oo ugu baaqday Hoggaamiyeyaasha Dunida inay Caawiyaan Qoxootiga ku jira Xeryaha Dhadhaab-Kenya
Hay'adda MSF oo ugu baaqday Hoggaamiyeyaasha Dunida inay Caawiyaan Qoxootiga ku jira Xeryaha Dhadhaab-Kenya Talaado, Oktoobar 02, 2012 (HOL) — Hay'adda MSF ayaa ka dayrinaysa xaaladaha murugsan ee ka jira xeryaha qoxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya, halkaasoo ay ku jiraan boqolaal kun oo qoxooti Soomaaliyeed ah, iyadoo warsaxaafadeed ay shalay soo saartay ku sheegtay in iyadoo toddobaadkan ay hoggaamiyeyaasha dowladuhu ku kulmaya munaasadda 63-aad ee guddiga fulinta ee UNHCR ay tahay xaaladda ay ku nool yihiin qoxootiga dhadhaab ku jira mid adag.Ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa dalalka qaybta ka ah heshiiska qaxootiga ugu baaqay inay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda Kenya ee qaxootigan marti-gelisay iyo UNHCR si ay markaa uga soo baxaan mas’uuliyadaha kaga aaddan qaxootiga Dhadhaab. Tallaabooyin xooggan oo lagu sii wanaajinayo ilaalintooda iyo gargaarkooda ayaa ah waajib mudan in la hirgeliyo.“Waxaan su’aal weyn ka qabtaa heerka gargaarka la siiyo qaxootiga,” ayaa uu yiri Bruno Jochum oo ah agaasimaha guud ee MSF oo toddobaadkii lasoo dhaafay tagay xerada Dhagaxleey oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab. “Iyadoo xaaladaha ammaanku ay tahay mid xun ayaa adeegyada aasaasiga ah iyo bixinta gargaarku ay aad hoos ugu dhaceen mana ahan mid lala yaabo in qaxootigu ay haddana mar kale ka dhex dillaaceen cudurrada daacuunka iyo hepatitis E.”MSF waxay warbixinteeda ku sheegay in tan iyo sannadkii la soo dhaafay ee 2011, maaliyadda uu caalamku siiyo xerooyinka Dhadhaab ay hoos u dhacday in ka badan 40% iyadoo tirada qaxootiguna ay sii kordhayso. Iyadoo xilli-roobaadku uu dhawaan bilaabanayo, ayaa MSF waxaa walaac ku haya hoy la’aanta iyo fayadhowr la’aanta jirta. Gargaarka ku-meel-gaarka ah ee hadda la bixinayo ayaa iska cad inuu yahay mid aan dad ku filnayn iyadoo aysan su'aalo ka taagnayn in waqti kaddib ay dhici karto inay mar kale ku dhufato dhibaato bani’aadamnimo qoxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab-Kenya.“Xaqiiqada ah in qaxootiga dhawaan yimid aan la diiwaan-gelin ma ahan mid la aqbali karo, waana caddahay inay tahay xadgudub lagu xadgudbay heshiisyadii qaxootiga iyo mucaahaddooyinka caalamiga ah,” ayuu Jochum hadalkiisa ku daray. “Waxaan dhiirri-gelineynaa wadahadallada socda ee lagu xallinayo arrintan muhiimka ah ee arrimaha qoxootiga looga hadlayo. Diiwaan-gelintu waa in si deg-deg ah dib loogu bilaabaa.”Maaddaama ay Soomaaliya weli ka jiraan iska-horimaadyo hubeysan ayaa arrinta ah in dad badan dib loogu celiyo dalkooda ay noqonaysaa mid laga hor-dhacay. Xaaladaha ammaanka ee dhulka ka jira ayaa ah kuwo aan suuro-fal ka dhigayn in gargaar la gaarsiiyo dadkaas.Inkastoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay soo roonaatay xaaladda ammaanka ee Dhadhaab ayaa waxaa haddana qaxootiga weli haysta dhibaatooyin kala duwan oo ka dhaca gudaha xerooyinka, kuwaasoo aan weli ahayn goobo ammaankooda la isku halleyn karo. "Hawlihii hay’adaha gargaarka ee ay ka mid tahay MSF ayaa culeys weyni saaran yahay. Tan iyo bishii Luuliyo kaddib markii shaqaale hay'adda ka tirsan afduub lagu qabsaday, taasina waxay horistaagtay in shaqaalaha caalamiga ah ee MSF ay kasii wadi karaan howlahooda caawinta xeryaha Dhadhaab. Maanta waxaa halis ku jira awoodda ururkan caafimaadku u leeyahay inay si habboon wax uga qabtaan xaaladaha caafimaadka deg-degga ah ee ba’an iyo inay bixiyaan gargaar caafimaad," ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka MSF ay soo saartay.Hay'adda MSF waxay ku baaqday in si deg-deg ah dib loogu furo diiwaan-gelinta qaxootiga cusub iyo in la hirgeliyo siyaasado lagu ballan-qaadayo ilaalintooda. Waa in sidoo kale la qaadaa tallaabooyin deg-deg ah si loo kaafiyo baahiyaha aasaasiga ah ee qaxootiga, gaar ahaan baahiyaha hoyga iyo fayo-dhowrka. Waa in wanaagga qaxootiga Dhadhaab ay muhiimad siiyaan dalalka qaybta ka ah heshiiska Qaxootiga.Ugu dambeyn, MSF waxay hawshiisa waddaa cusbitaal 200 sariirood qaada oo ku yaalla xerada Dhagaxleey oo ka mid ah shanta xero ee qaxootiga ee Dhadhaab la isku yiraahdo. Shaqaalaha MSF waxay sameeyaan celcelis ahaan 14,000 la-talin caafimaad ah bil kasta waxaana ay seexiyaan 1,000 bukaan oo ka kala tirsan qaxootiga iyo bulshooyinka degaanka martigeliyey. Cusbitaalku wuxuu bixiyaa daryeelka dadka waaweyn iyo carruurta, daryeelka umulinta, qalliin iyo daaweynta HIV/AIDS-ka iyo qaaxada. MSF waxay sidoo kale hawshooda waddaa afar rugo caafimaad oo ku yaalla Dhagaxleey, kuwaasoo bixiya daryeel caafimaad oo ay ka mid yihiin daryeelka ka horreeya dhalidda, tallaalada iyo daryeelka caafimaadka dhimmirka.Hal sano ka hor bishii Oktoobar 2011 ayay ahayd markii laba shaqaalaha MSF ka tirsan oo lagu kala magacaabo, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut afduub looga kexeystay xeryaha qaxootiga Dhadhaab; iyagoo gargaar caafimaad oo deg-deg ah siinaya dadka Soomaaliyeed. Illaa hadda waa la haystaa, waxaana taasi ay keentay in hay'adda MSF ay joojiso mashaariicdii waaweyneyd ee ay ka fulin jirtay xeryaha Dhadhaab-Kenya.
Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Online maxuseen@hiiraan.com
Talaado, Oktoobar 02, 2012 (HOL) — Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa dadkii ay waxyeelladu kasoo gaartay fatahaadihii Baladweyne ku dhuftay gaarsiisay gargaar kala duwan oo ku kacay lacag gaaraysa 100,000 oo doollarka Mareykanka ah. Madaxweynaha Somalia iyo wafdi uu Hoggaaminayay oo Degmada Baladweyne gaaray kulammana la leh Maamulka iyo Waxgaradka 10/2/2012 2:43 AM EST